Trump oo mar kale xasuusiyay ISIS .. "Ha u ogolaanin inay baxsadaan" – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Trump oo mar kale xasuusiyay ISIS .. “Ha u ogolaanin inay baxsadaan”
Trump oo mar kale xasuusiyay ISIS .. “Ha u ogolaanin inay baxsadaan”
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhowr jeer ku celceliyay baahida loo qabo in aan loo oggolaanin in ISIS ay ka baxdo, isagoo sheegay in waddankiisu uu sii haysto tii ugu adkeyd.
Wuxuu ugu yeeray Turkiga iyo Kurdiyiinta, inaysan ogolaan baxsashada maxaabiista xubnaha ka tirsan ururka argagixisada ee waqooyiga bari ee Syria.
“Mareykanku wuxuu sii wadaa waxa ugu xun ee maxaabiista ISIS. Turkiga iyo kurdiyiinta waa inaysan u oggolaanin inay cararaan,” ayuu ku soo qoray bartiisa twitter-ka habeenkii Axadda. Midkood ayaa halkaan yimaada.
Ku guuldarreystay in la wareejiyo Kaydinta Macluumaadka
Wargeyska New York Times, oo soo xiganaya laba sarkaal oo Mareykan ah, ayaa sheegay in Washington ay ku guul darreysatay inay wareejiso ku dhowaad 50 xubnood oo muhiim ah oo ka tirsan kooxda ISIS ee ay kurdiyiinta u xireen howlgalka millateriga Turkiga. Saraakiisha ayaa sheegay in kooxdu ay haysay macluumaad qiimo leh.
Waxaa xusid mudan in Trump maalmo ka hor ku dhawaaqay in waddankiisu laga musaafuriyey Suuriya laba ka mid ah cunsuriyada ugu halista badan ee kooxda ISIS lagana soo qabtay qol loo yaqaan Beatles, Alexander Kuti iyo Shaafici Sheekh, kuwaas oo loo gudbiyey Ciraaq.
Previous article7 Talo oo Kaa Yareyneysa Welwelka Maalinta Arooskaaga.. Si Wanaagsan u Seexo Hana Illoobin Inaad Wax u Cunto
Next articleTrump again reminds ISIS .. “Don’t let them escape”